Izifiso ezinhle zikaNingbo Joiwo zokuhlolwa kokungena ekolishi ngo-2020-Izindaba-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
ISIKHATHI: 2020-07-07 HITS: 18
Lapho kuphela lo bhubhane, iGaokao yowe-2020 (ukuhlolwa kokungena ekolishi)ibambezelwe ngenyanga eyodwa ngokuqhathanisa nonyaka odlule, futhi ekugcineni yaqalwa namuhla.
Izitshudeni zalonyaka akulula. Ukuze kuvinjelwe ukusabalala kwegciwane futhi kuqinisekiswe ukuphepha kwabafundi, iChina isithathe isimo sokuhlehliswa kwama-semesters ezikole futhi yavula izifundo eziku-inthanethi kanye nezinkundla zezinsizakusebenza zelebhu ukuhlela imisebenzi yezemfundo eku-inthanethi. , okuyinto engeyinhle neze ngenqubekela phambili yabo ekuhlolweni kokungena ekolishi.
Kepha njengoba isisho esidala sihamba, abantu bazoba ngemuva kokuhlupheka.
Ngikholwa ukuthi lokhu okwenzekile kuzobenza baqine, ngoba Izinhliziyo zabantu baseChina zihlala zixhumene, futhi sonke sizohlangana ukulwa nalolu bhubhane.
Usuku ngoJulayi.7th, 2020 usuku lokuqala lokuhlolwa kokungena ekolishi. Kuzoqhubeka izinsuku ezine.Ukuhlolwa kokungena ekolishi ukuhlolwa okubaluleke kakhulu eChina. Kungashiwo nokuthi ukuhlolwa kokungena ekolishi kungashintsha izimpilo zabantu isikhathi eside. Umuntu othola amamaki amahle angaya eyunivesithi engcono athole imfundo ephakeme kakhulu. Njengokungena kweyunivesithi kwamanye amazwe
Ukuhlolwa (ACT), njll.
Ungbo Jiuwo ufisa ukuthi bonke abafundi bathole amamaki amahle ezivivinyweni zokungena ekolishi. Iminyaka eyishumi yamaphupho ingaba amaphupho andizayo namuhla.